!!!"Inspired by WORDS"-Own-Collection -"रचना"!!!: ~~अनायस मै भूल भयो ~~
~~अनायस मै भूल भयो ~~
कतार पुग्दाको म-पुरानो फोटो
चुमेर पाना भरि !!!
यति म लेखिदिन्छु । बितेका बातहरु जाने जति लेखिदिन्छु ।
बितेका बातहरु जाने जति लेखिदिन्छु । चुमेर पाना भरि ।
रातभरि भरि एउटै सपना देखेको हुन्छु ।
रातभरि भरि भरि एउटै सपना देखेको हुन्छु ।
देखेका सपना हरु सबै म लेखिदिन्छु ।
मुस्कानका गजका टुक्रा हेरि नमस्कि दिनु ।
नलेख्न, पर्ने पनि सायद म लेखिदिन्छु ।
चुमेर पाना भरि । वर्ण्र्ाागरेर त्रि्रो सवाङ्ग लेखिदिन्छु ।
वर्ण्र्ाागरेर त्रि्रो सवाङ्ग लेखिदिन्छु ।
एकछिनको निम्ति तिमीलाई उदाङ्ग देखिदिन्छु ।
काडाँ सरि देखाई दिन्छु, हुन सक्छ च्याती दिन्छु ।
म त मन परेको लाई यस्तो नै लेखिदिन्छु ।
चुमेर पाना भरि !!!!!
अब मलाई भन्न मन लाग्यो । यो जीवन वास्तवमै केही छैन् । म, मेरो, मेरी, हाम्रो, तेरो........भन्ने शब्दहरु आफैमा लज्जास्पद भएर पनि हामीलाई घुमाईरहेको छन् । अनि हामी चाँही त्यसैलाई सर्वोपरि ठानी त्यसैमा समर्पित भई बाँचेका छौं ।
के हो यो मानव चोला, के का लागी - किन हामी एश, आराम खोजिरहेका छौं - किन पैसा-पैसा भन्दै कुदिरहेका छौ - किन पैसाका अगाडि दाजु-भाई पनि भन्दैनौं । मित्रताको अर्थ बुझदैनौं । मित्रतालाई पनि पैसामै जोखिदिन्छौ । सबैलाई बुझाउन सजिलो हुने शब्द पैसा । जसवाट मित्र पनि बनिने, शत्रु पनि बनिने । पैसा दियो / दिएन भने पछि सबै र्छलङ्ग हुने !
मेरो जिवनमा मैले अनौठो भुल गरे जसमा मेरो कुनै पनि स्वार्थ थिएन् । म त मेरो विचारमा मेरो साथीको लागी राम्रो गर्देथ्ये तर त्यो त वास्तवमै कहालीलाग्दो भएछ । अहिले मेरो आँखा अगाडि ति मेरा कु कार्यहरु नाचिरहेका छन् । म के नै गर्न सक्छु र सिवाय त्यस कार्यलाई सम्झन आफूलाई परिवर्तन गर्न वाहेक ! तर उसको जिवनमा मैले ल्याईदिएको परिवर्तनलाई सुर्घार्न त पक्कै पनि सक्तिन् । तर म मेरो जीवन भर नै यो भुल्न चाहन्न । त्यसैले टिपोट गरिरहेको छु ।
मेरो सम्पर्ुण्ा नालीबेली मेरै अर्थ र भोगाईमा / देखाईमा यसरी शुरु हुन्छ जुन चाँहि मेरो भूल सँग जोडिएको छ । यो सबै मेरो नजरको देखाई र गर्राई मात्र हो ः-
वास्तविकता मलाई अहिले थाहा हुँदा कथा मेरो वालापना देखिको हो । हामी कक्षा ८ पास गरेर ९ मा पुगेका थियौ । त्यती खेर अफसनल म्याथ चाँहि सेक्सन क मा मात्र पर्ढाई हुँन्थ्यो त्यसैले होला जान्ने बिधार्थीहरु सेक्सन क मा नै अलि बढि भेला भए । म र अशोक उप्रेती हामी सेक्सन क को रैथाने त्यसमा पनि कक्षाको जान्ने विधार्थी हामीलाई केही परवाह नै थिएन् । हामी सँग अरु नजिकिन खोज्थे । हामी त्यसै उढाउँथ्यौं । मलाई पनि थाहा छैन । खै किन हो म र अशोक प्राय एस.एल.सी. सम्म साह्ै नजिक थियौं । कम्पिटिसन थियो हाम्रो पर्ढाईमा, हाम्रो कक्षामा तर पनि हरबखद हामी सँगै नै हुँथ्यौं । मेरो र उसको विचार कम्पिडिसिन बराबरि सँग अनि एक अर्कालाई सिकाएर नै गर्ने भएर होला । राजु श्रेष्ठ अर्को सेक्सनबाट हाम्रोमा आएको जान्ने विधार्थी थियो अनि अरु उसको साथि मदन प्रर्साई लगायत धेरै नै मित्रहरु । सरकारी स्कुल मलाई अहिले सम्झदा लाग्छ हामी १०० भन्दा बढि विधार्थी थियौ हाम्रो सेक्सनमा । झन्डै-झन्डै केटा र केटीको सँख्या उस्तै नै थियो । गंगा राजबंशी कक्षा ९ सम्म आउँदा उ नै कक्षाको पहिलो विधार्थी थियो । मलाई लाग्छ कक्षा १ देखि नै उ पहिलो हुदै आएको थियो । मेरो कुरा गर्दा म त्यही स्कुलमा र्सवप्रथम कक्षा २ मा भर्ना भएको थिए अनि फेल पनि । त्यसपछि म चन्द्गढी घोडामाराको स्कुलमा भर्ना भएर फुपुको घरमा बसेर पढेको थिएँ । पछि खै हाम्रो बुबा र बुबाको दिदि बीच मन मुटाव भएपछि फेरी म त्यही स्कुल आएको थिएँ । कक्षा ५ हो कि ६ हो मलाई एकिन छैन् तर आएँ । चन्दगढीबाट मेरो पर्ढाईमा आकाश धर्ति बीचको परिवर्तन आएको थियो । म कक्षा पहिलो हुने बानी परिसकेको थिए तर यहाँ ठूलो स्कुलमा आएपछि पहिलो हुन प्रयासरत रहन्थ्ये । मलाई याद छ मेरो पोजिशन ३ भन्दा अगाडि कहिल्यै बढेन यहाँ आएपछि । त्यतीखेर देखि म र गंग्ाा राजबंशी सँगै एउटै कक्षामा थियौं । गंगाको अक्षर साहै नै राम्रो थियो मेरो असाध्यै नराम्रो ! सबै मलाई गाली गर्थे अक्षर राम्रो पार भनेर हाम्रो नेपाली पढाउने सर -टेकनाथ) मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो त्यसैले होला केही चाँहि सुधार भएको थियो । तर वास्तवमा मेरो अक्षर नराम्रो छ । कक्षा ८ मा जिल्ला स्तरीय परिक्षा हुन्थ्यो त्यसमा म पहिलो चोटि मेरो पोजिशन २ भएको थियो पहिलो गंगा नै थियो । देास्रो हुनेमा म र एक जना अर्काे सेक्सनको केटि परिछ त्यो पछाडि पुरस्कार लिदाँ थाहा भयो ।
अब मेरो भुल -कक्षा ९) वाट शुरुवात भएको छ र अहिल म कतारमा आइपुग्दा त्यसको अन्त्य भएको छ । लगभग यो वास्तवीकता ११ बर्षलामो छ । यसमा म सबै मेरो नै शब्दमा लैख्दैछु । जुन त्यसबेला घटेका थिए । मेरो नजरले सुने हेरेका थिएँ ।
अलि ठुलो कक्षामा आएपछि अफसनल विषय आउँदो रहेछ हाम्रोमा दर्ुइटा अफसनल विषय थिए । म्याथ र कृषि ! जुन चाँहि हाम्रो प्रत्येक दिनको रमाईलो कक्षामा गनिन्थो हाम्रो लागी । बस रमाईलो बढि हुन्थ्यो । अफसनल म्याथ पढ्ने ३, ४ जना केटि थिए भने कृषि पढ्ने ७, ८ जना केटी !!! म र अशोक अरुलाई जिस्काउन मा नै ब्यस्त हुन्थ्यौ । म जिस्काउँथे मात्र तर मेरो लजालु स्वभाव थियो केटिहरु सँग बोल्दिनथे । हामी एम एस्सी सर भन्थ्यो अफसनल पढाउथ्यौ हिन्दी मात्र बोल्थ्यो अशोकले भनेको जे पनि मान्थ्यो । हामी दर्ुइटा अरुलाई फसाउँथ्यौं । अफसनल पढ्ने मुना बुढाथोकि जसलाई हामी गंगा राजबंशी सँग नाम जबरजस्ती जोडथ्यौं । म या अशोक गंगा सगँ बसेका छौ र मुना आई भने मुना बस भनी छोडिदिन्थ्यौ । गंगा बाहिर केहि पनि भन्दैन्थ्ाौ तर अलि आफनो सबै कुरा अरु सँग नखोल्ने खालको मान्छे थियो । बस हामी मज्जा लिन्थ्यौ । हामी सँग केटीहरु रिसाउँथे गाली गर्थे तर हामीले मजाक गर्ने कहिल्यै छोडेनौ म मुखले छुस्स छुस्स भनेर मजा गर्थे भने अशोक ताल परे जे पनि गर्ने अलि एडभान्स थियो । हामीले एस्ट्रा नाम कमाएका थियौ , अशोकको नाम पाउरोटि अनि मेरो नाम दारे भएको थियो । किनकी मेरो दाँत अलि लामो थियो उसको गाला पुक्क पुक्क थियो । रिस उठ्दा अरु हामीलाई त्यही नामले बोलाउँथे । मलाई अरु सँग मज्जा गर्नुबाहेक केहि पनि आएन । हामीले पनि उनीहरुको विभिन्न नाम राखेका थियौं । ं
कक्षाका फटाहा साथिहरु हामी सँग औधि मिल्थे किनकी हामी प्राय सबै केटिहरुलाई जिस्काउँथ्यौं, जे पनि भन्ने गर्थो र केटीहरु हामी सँग सिकाई माग्न आउँथे, हामीलाई खासै केहि भन्दैनथे । अरुको मजाक उडाउनु खबर पुर्‍याईदिन्छु भनी पार्टर्ीीुवाउन लगाउनु हाम्रो दिनचर्या थियो । तर यहि क्रममा नै राजु श्रेष्ठले मुना बुढाथाकी होईन प्रर्साईलाई मन पराउँछ भन्ने हामीले थाहा पायौं । यो हाम्रो लागी नयाँ शुरुवात भयो ।
मेरो मस्तिष्कमा नै माया भन्ने शब्द चाँहि घृणा भएर गडेको थियो किनकी मलाई मेरो परिस्थिती, समाज अनि मेरो चन्द्रगढीको बर्साई र अरुको देखाईले नै पैदा गराएको थियो । म मायाको विरुद्धमा घण्टौ सम्म बहस् गरिरहने मान्छे जुन मेरो सफलता नै अन्त्यमा गएर साथिको लागी भुल भयो र मैले आजसम्म गरेका कार्यमा त्यही साथीको लागी ठुलो भुल गरे । जुन मेरो अति प्रिय तथा हितैषी भएको थियो तर अजै पनि मेरो नजरमा हुन त त्यो मेरो लागी सफलता नै हो मायाको विरुद्धमा ।
कृषि पढ्दा मुना प्रर्साई लगायत हाम्रो अफसनल ग्रुप र अरु एक दुइ जना केटि थपिन्थे अरु अर्को नै बिषय पढ्न जान्थ्ो । केटिहरुको सिट डङङ्गै खाली हुन्थ्यो जुन केटिलाई कै भन्नु छ जिस्काउनु छ त्यही केटीको सिटमा बस्थ्ाौं अनि राम काहानी लेख्थ्यौं । कसैले प्रस्ताव राखेको छ भने छुसुक्क भनिदिन्थ्यौ अनि टिपिनमा पार्टर्ीीान्थ्यौं । राजु चाँहि कृषिमा केटिहरुको सिटमा केटिहरु सँग बसेको हुन्थ्यो । उसको नाम केटि पिढित हामीले राखेका थियौं । हाम्रो कक्षा भवन दुइ तला मा थियो । टिपिनको घन्टि लाग्ने बित्तिकै हामी किर् इटा लर्डाई कि चुगि खेल्नमा ब्यस्त हुँन्थ्यौं । मलाई जे होस् खेल्न नआउने चाँहि केहि पनि थिएन । म लिडर चाँहि थिइन तर शुरुमा नै छानिन्थे । अशोकको स्कुल छेउमा नै दोकान भएकोले दोकानमा प्राय जान्थ्यो । राजु कि केटिहरुलाई सिकाउँदै हुन्थो कि केटिहरु सँग बसेर खाइरहेको हुन्थ्यो ।
कक्षा ९ बाट १० मा जाँदा अशोक पहिलो र म दोस्रो भएँ गंगा पहिलो चोटि तेस्रो भयो अनि कहिल्यै माथि आउन सकेन । कक्षा १० मा हामी झन उछरिङखल भयौ अर्कौ एउटा बिजनेश माईन्डेड साथी निर्भय पनि आयो । उ चाँकि लुकेर केटिहरुको फोटो खिचेर केटाहरुलाई बेच्थ्यौं । हामी चाँहि केटिहरुलाई उचाल्थ्यौ र झगडा लगाउँथ्यौं पातको बतिङ्गर बनाउने हाम्रो बानी थियो । म र अशोक यति सम्म भएको थियौं कि लुकेर सिढीको मुनिबाट केटिहरुले कुन कट्टु लगाएको छ हेरर्थौ र छेड हान्थ्यौं । रातो, निलो इत्यादी । केटिहरु आज हामी सँग रिसाएपनि भोलिपल्ट देखि बोल्न थालीहाल्थे । जबरजस्ती पिस बनाएर, मन परायो भनेर अरुलाई उचाल्नु बाहेक हाम्रो काम केहि थिएन् । अशोक र मैले यति सम्म गर्यो कि राजु श्रेष्ठको नाममा शोभा ढकाललाई प्रेम पत्र लेख्यौं र दियौ पनि शोभा ढकाल राजु सँग बोल्न नै छोड्यो राजुलाई केहि पनि थाहा भएन् । जुन चाँहि भर्खर म कतार आउनु अगाडि शोभा ढकाललाई भनेर आएको जसको मलाई लाग्छ अहिले ४ बर्षो छोरी छ । आजको मिती तारिखमा ३० अक्टोबर २००५ हो म कतारको लागी ११ सेप्टेम्बरमा ९ बजे एअर नेपाल चढेको भने १२ सेप्टेक्बर यहाँ आइपुगेको हो ।
हाम्रो स्कुल जीवन अत्यन्त नै रमाइलो भएको थियो जुन प्राय सबैको नै हुने गर्छ त्यसपछि सबैको धार छुटि्दो रहेछ । त्यहि स्कुलकै क्रममा राजुले मुना प्रर्साईलाई एउटा प्रेम पत्र पठाएको रहेछ जुन मुनाले पढेर च्यातीछ त्यस पच्छात राजुसँग बोल्न ने चोढिछ । त्यो प्रेम पत्र राजुले मदन प्रर्साईको हातबाट मुनालाई दिन लाएको रहिछ । पछि हाम्रो स्कुलको अन्त्यतिर सबै साथिहरु छोडि्ने क्ममा बोल्दा फेरि मुना र राजुको बोलचाल भएछ । मलाई अझै याद छ मुनालाई देखाएर मैले र अशोकले धेरै नै फाईदा लुटेका थियौ । मुना भने पछि राजु खर्च गर्ने तयार हुन्थ्यो हामी खान । यसरी हाम्रो एस.एल.सि. अगाडि टेस्ट भयो । टेस्टमा म पहिलो, अशोक दोस्रो भयो । निकै नै हल्ला भयो । एस.एल.सि.मा मेरो टोटल भन्दा अशोकको दुइ मार्के बढि आयो म दोस्रो भए । प्राय लेडिजले चान्स पाए । सरकारी स्कुल थियो बढि फेल हुँन्थ्ये । म चाँहि प्राय सवैलाइै दिदि नै भन्न गर्थे किनकी मेरा दिदिका साथिहरु पनि थिएँ र मलाई नै दिदि भन्ने शब्द नै उपयुक्त्त लाग्थौं ।
एस.एल.सी. पछाडी हामी सबै अलग्यौ ! मुना फेल भई, चान्स पाई । राजु पढ्नलाई काठमांडौ गयो । अशोक, गंगा, म विज्ञान पढ्न तिर लाग्यौ । मैले फेरि कसैलाई भेटिन् केाही सँग बोलिन् । किन कि मलाई केटिहरु सँग कुनै चासो नै थिएन म एउटा सिद्धान्त पाल्ने मान्छे "बोली रह्यो, भेटी रह्यो भने जो सँग पनि माया बस्छ" त्यसैले म कसैलाई भेट्दिनथे । भेटिहाले यसो बोल्थे । बस त्यति नै कोहि सँग नजिकिने मेरो चाहाना थिएन् । त्यसैले मलाई धेरैले नामर्द पनि भनेका छन् मेरो त्यो नामर्दपना होईन त्यो मेरो पारीवारीक परिस्थ्िाती आनि आफुमा रहेका सङकल्प हो । म चाँहे भने जसलाई पनि फकाउन सक्छु भन्ने मान्छे र अझै घमन्ड गर्छर्ुुैले धेरैलाई जाँच्नको लागी त्यो स्टेजसम्म पुर्‍याएको छु जाँहाबाट प्रमि-प्रमिका एक-अर्काका प्रेममा डुब्ने गर्छन् । तर म चाँहि छोड्ने गर्छर्ुु यो नै मेरो बिशेषता अनि बाध्यता भयो । साथीहरु प्रेमको बारेमा म सँग कुरा गर्ने चाहदैन् तर मेरो चाँकि कुरा त्यही बाट शुरु भएु त्यही अन्त्य हुन्छ । किनकी संसारमा यहि यस्तो शब्द हो जो एक-अर्काका लागी आत्मियता जगाउँछ अनि जो सँग पनि नजिक हुन सकिन्छ । मैले धेरै उपनाम पाएको छु । मायाको विरुद्धमा उभिने भएकोले ! विवेचनाको मेरो लेखाईबाट पनि मैले धेरै नै कमेन्ट पाएको थिए "किन वैरागी, किन विरोधी भन्ने गर्थे" !
बिज्ञान पढ्न गंगा र अशोकले छोडे , फेरी गोमेन्द्र आई बिजनेश पढ्न थाले । म आफ्नो साथिहरुमा अब एक्लो भएको थिएँ । मैले ३ बर्षलगाएर पास गरे । तर मैले नसकेर होइन् यो सबैको आ-आफनै परिस्थिती अनि समस्या हुँदोरहेछ । सबैलाई आफनो समस्या नै माहाभारत लाग्छ त्यस्तै मेरो पनि छुट्टै छ अनि परशनल, घरको जेठो मान्छे भएकोले होला कहानी आफ्नै छ । तर अहिले सम्म म सफल चाँहि भएको र्छर्ुइन, मात्र मलाई पैसा चाहिएको छ । म पैसाको पछि पछि कुदेको छु । पैसा नपाई म केहि पनि सोच्ने छैन् । आफुले आफ्नो इच्छालाई दबाउनु मेरो कर्तब्य हो । यहि विविध कारणले होला सबै स्वार्थी भएका छन. म पनि भएको छु । धेरैले मलाई भन्ने पनि गरेका छन् ।
म राजु तथा कोही सँग पनि अझै नजिकिएको थिईन सिवाय अशोक बाहेक ! अशोकलाई केहि थाहा छ । तर उसलाई थाहा छ मित्रता ! मेरो पहिलो बर्षकलेजको पर्ढाईमा म्याथमा दागी लाग्यो । मैले रि-चेक गर्ने चाहे । मलाई विश्वास छ मेरो दागी लागेको थिएन् । तर म फेल भएँ । चेक गर्ने काठमाडौं जानु पथ्र्यौ । राजु काठमाडौंमा थियो पहिलो चोटि उ गएदेखि मैले मेरो स्वार्थका लागी फोन गरे र सबै भने र्सर्टिफिकेट पठाँए उसले गएर हेरो सबै काटेको थियो रे म फेल भएँ । अनि उसले मलाई चिठि लेख्दा मुनाको बारेमा सोधो म मन पराउँछु भन्यो । म छक्क परे । उसको भनाईमा मुनाले पनि मलाई मन पराउँछे भन्ने थियो । तर अब मेरो कर्तब्य पत्ता लगाउने भयो अनि मैले गर्ने चाह्ये पनि किनकी म बाहेक उसको लागी गर्ने कोही पनि थिएन् !
यता मेरो दिदि र मुना कलेज सँगै पढथे । राजुले मलाई पठाएको चिठी मुनालाई पढ्न दिएँ मैले होइन मेरो दिदिले ! मैले मन पराएको छैन् भनी मुनाले भनेछ । अनि मैले वास्तवीकता खुलाएु चिठी लेखेको थिँए राजुलाई जुन चाँहि उसको लागी हृद्यस्पर्धि भएछ । भन्छ, अझै ऊ सँग त्यतिखेर मैले पठाएको चिठी छ । मलाई लागो, अब उसले मुनालाई भुल्यो होला । तर विपरित भएछ । अब त उ काठमाडौ छोडेर विर्तामोड पो आउने भएछ । मलाई थाहा थिएन पछाडि राजुको आमाले भन्दा थाहा पाए मलाई अझै थाहा छ उहाँले भन्नुभएको "मामाले बोलाको बोलाई छ तर हेरन राजु जान्न भन्छ ! " मलाई थाहा छैन के भयो । यसरी नै दिन बिते, बितीरहेका थिए । म आफनै विविध कारणले काठमाडौ गए । मेरो काठमाडौको बर्साई ३ बर्षो रह्यो मात्र कम्प्युटरमा अपडेट भए दिनचर्या शंकरदेवको ग्राउण्ड अनि शंकर देव क्याम्पस वरिपरि घुमिरह्यो अनि सकियो पनि !
म फेरि झापा आँए । त्यहाँ पहिले देखि नै एक कम्प्यूटर संस्था सँग आवद्ध थिए । मैले एस.एल.सि पास गरेदेखि । झन आइं एस्सी सकिएपछि म त्यही नै बस्न थाले । घर पनि कहिलेकाँहि जान्थ्ये । मुनामदन फोटो स्टुडियो र एम सि सि कम्प्यूटर नै मेरा प्रिय भए । हुन त मुुनामदनमा म सानै देखि नै थिए स्कुल पढ्दा देखि नै भिडियो खिच्ने, फोटो खिच्ने बानि परि सकेको थिँए । किनकी दिपक प्रर्साई र म मिन्थ्यौं अनि हाम्रो घर पनि सँगै थियो । पछि युनिक फोटो स्टुडियो पनि खोल्यो अनि बेचियो पनि अझै हामीले शुरुवात गरेको चलिरहेको नै छ तर धेरैको हातमा किन बेच भईसको । पछि म कम्प्युटर तिर लागेको थिए जुन मेरो प्रोफेशन भएको छ । त्यसरी दिनहरु बितिरहेका थिएँ । मैले कम्प्युटर चलाईरहेको थिएँ । पछि भाई र म अनायसमै फस्यौं । हामीले विविध कारणले गर्दा आफूलाई अपडेट गर्‍यौं । सफटेक आई टि स्कुल खोल्न पुग्यौं अनि म झापामा नै बस्न थाले ।
अब मैले लेखेका मेरा प्रत्येक शब्द मेरा व्यक्तिगत विचार हुन् । यसमा अरुलाई केहि पर्ने गए म क्षमाप्राथि नै छु ।
राजु पनि बिर्तामोडमा नै थियो । एकै ठाउँमा भएपछि चिना पर्चि बढ्दो रहेछ अनि मित्रता प्रगाढ बन्दो रहेछ । अझ जीवनमा आईपर्ने समस्याले त झनै आत्मियता बढाउँदो रहेछ । उसले पनि ठेक्कामा गाडि कुदाईरहेको थियो । उ पनि ब्यस्त हुन्थ्यो । म पनि खाली भएको बेलामा उसको गाडिमा जान्थे । अब भने हाम्रो मित्रता प्रगाड भएको थियो । हाम्रो ब्यस्तताले हाम्रो भेट नभएपनि फोन मा मिनियम एक चोटि गफ चाँहि भईरहन्थ्यो । अनि मैले उसको मनको ब्यथा जान्ने मौका पाएको थिएँ । उ अझै मुनालाई मन पराउँदो रहेछ । तर खै कस्तो माया हेा उसको ! मान्छे निडर छ जे पनि गर्ने साहस राख्छ ! आफूलाई क्षणभरमा परिवर्तन गरिदिन्छ तर मुनाको अगाडि पर्दा उ सँग बोल्न नै सक्दैन् ! उसको यहि बानिले पनि म मा माया प्रति सकारात्मक धाराणहरु पलाएका थिए । म अहिले जति पनि सकारात्मक भएको छु यो सबै उसैको देन हो म अहिले जति पनि केटिहरु सँग बोल्ने भएको छु । यो सबै राजुले गर्दा नै म मा ल्याएको परिवर्तन हो । यति सम्म भयो कि मलाई एकै दिन लाग्छ कुनै चाड थिएन त्यो दिन चार जना केटिहरुले प्रस्ताव राखेका थिए तर मैले हाँसेर नै उर्डाई दिँए । म मा अचम्म कै परिवर्तन आएको थियो । म केटीहरु र मेरो छेउछाउमा कोही पनि छैन् भनै जो सँग पनि खुलेर कुरा गर्ने सक्ने भएको थिएँ । एंवम क्रममा राजुको जीन्दगीमा पनि अनि मुनाको जीन्दगीमा पनि धेरै नै मायाका / प्रेमका परिवर्तनहरु आएँछन् । कसैले कसैलाई मन पराए राम काहानी भयो । पुरुषवाला समाज न हो लेडिजलाई मार पर्छ । कसैका लागी त्यो गारो भयो भने कसैको लागी खेलौना भयो । राजुको जिन्दगीमा पनि धेरै नै उतार चडाव आए । तर पनि उ मुना भन्न छोड्दैनथ्यो । म पनि अत्यन्त ब्यस्त भएँ । विहान ४ बजे उठेको मान्छे बेलुका १२ बज्थ्यो सुत्दा खेरी । त्यही भएर नै होला म निकै नै दुब्लो थिएँ ।
म दिनमा एक चोटि खाना खान घर जान्थे म घर जाँदा राजुको घर हुदै जाने अनि आउने बानी परिसकेको थिएँ । मैले राजु धेरै ने केटिहरु सँग नजिक भएको पाएँ सायद उ भन्दा म बढि थिएँ होला तर पनि मुना उसको मुखबाट कतै जादैनथ्यो । मेरो नाता सबैसँग शिक्षक र बिधार्थीको हुन्थ्यो साथीहरु कम थिए ।अब हाम्रो मित्रता यति सम्म भई सकेको थियो कि उ काहाँ छ म भन्ने गर्थे अनि मेरो प्रत्येक जाने ठाउँ पनि उसलाई थाहा हुन्थ्यो । उ सँग म जति नजिकिएको थिएँ सायद पहिलो चोटि कोहि सँग नजिकिएको थिएँ तर उसको लागी म भन्दा मदन प्रर्साई नजिक थियो । उसको विचारमा के थियो मैले बुझन सकेको छैन् । अनि उसको म प्रतिको साचाई कस्तो छ मलाई त्यो पनि थाहा छैन् बस साथि भनी सोचिदिए पुग्छ ।
मलाई थाहा भए अनुसार मदन ले एउटी केटीलाई मन पर्‍याउँदोरहेछ । जसलाई मदन सँग बिहे गरिदिने मुख्य कार्य राजुले गरेको रहेछ । किनकी उनीहरु केटा-केटी देखि नै निकै मिल्दै आईरहेका थिए । पहिले मदनको ससुरालीमा मदन एक्लै गयो भने अचम्म मान्ने गर्थे रे किनकी उसको साथि राजु आएन भनेर । मलाई थाहा छैन् कसको गल्ती छ अनि कसको स्वार्थ लुकेको छ । किन उनीहरु बीच मन-मुटाव भयो । यसमा राजुसँग म नजिकिएको थिएँ मदन सँग थिईन् । पछि मदनको कुरा सुन्दा राजुको गल्ती लाग्छ राजुको सुन्दा मदनको गल्ती लाग्छ । तर म चाँहि अलिकति प्रत्येक शब्द शब्द याद गर्ने भएकोले उनिहरुको कुरा बाझिएको पाँए । तर गल्ति कसको हो भन्न सक्त्तिन् । पछि सोल्टि सोल्टिनी भन्दै मदनको साली मन्जुले राजुलाई मन पराएर प्रेम प्रस्ताव राखिछ । राजुले मदनलाई भन्दा मेरो शालि हो जे गर्छस् गर केही भयो भने म छु भनि पहिले भनेछ मलाई लाग्छ हो पनि किनकी साली र राजुलाई भेट गराउने माध्यम शुरुमा चँाहि मदन नै थियो त्यसमा स्वार्थ छ कि मित्रता हो म भन्न सक्त्तिन् । अनि कसले-कसलाई बुझन नसकेको हो मलाई थाहा छैन् । तर केहि चै छ तिनीहरुको बिचमा छ । जसले गर्दा बर्षो देखिको मित्रतालाई तुषारापात गरिदियो । एक-अर्काको नराम्रो मात्र देख्न सक्ने बनाईदियो । बीचमा छ केही जुन मलाई थाहा छैन् । मैले जे पाए त्यो मैले मेरो विचार अनुसार राजुको भलाईको लागी गरेको थिएँ । जुनमा म बाठो हुनुपर्ने कुनै कारण नै थिएन् । त्यसपछि राजु र मन्जु प्रेमको गहिर्राईमा काँहा सम्म पुगे त्यो उनिहरुलाई नै थाहा होला । जुन मलाई पटक्कै थाहा छैन् । मैले राजुको भनाई लाई विश्वास गर्न सकिन् किनकी आज उसले जे भन्थ्यो भोली पल्ट त्यही कुरालाई अर्को नै भन्थ्यो । आफ्नो गल्ति देखाउन नचाहने मान्छे मेरो विचारमा राजु हो । आफ्नो गल्ति जहिले पनि लुकाउथो चाँहे त्यो सानो नै किन नहोस् । त्यसैले गर्दा अलि सिरियस कुरा म उसको भनाई पत्याउन् छाडिसकेको थिएँ । मलाई याद छ राजुले मलाई उनिहरु पिकनिक गएर आएको बेलो मन्जु भनेको यहि हो भनेर देखाएको थियो र मैले पहिलो चोटि देख्दा नै मलाई मन परेन भनेको थिएँ तर पछि उ सँग बोल्दा राम्रो नै पाएँ । मैले मन परेन भन्दा राजुले किन भनेको थियो तर मैले मन परेन मात्र भनेको भिएँ ।
होला आफ्नो भनेको आफ्नो नै हुन्छ कसले पो आफ्नो शालिको नराम्रो देख्न सक्छ र दिन बित्तै गएपछि मदनमा पनि परिवर्तन आएको हुन सक्छ जुन हरेक मानिसहरुमा विवाह गरिसकेपछि आउनर्ेगर्छ । मदनले पनि राजुलाई विश्वास गर्ने नसकेको हुन सक्छ मलाई थाहा छैन् । तर मदन पनि अब मन्जुलाई राजु सँग बोलेको हर्ेन चाहदैनथ्यो । अनि उ पनि मन्जुको केषमा लुकिछिपी गर्न थालेको थियो । राजुको आमा कडा हुनुहुन्छ मनका केहि राख्नुहुन्न भनि हाल्नुहुन्छ । मलाई अझै याद छ "भि.सि.डि. अफ थियो म भि.सि.डि.को रिमोट थिचिरहेको थिए, ममिले किन थिचेको ब्यार्टर््रर्ीीकिन्छ भन्नुभयो" । कडा हुनुहुन्थ्यो तर उहाँको मनमा केहि नराख्ने बानी मलाई मन परथ्यो । राजु र मेरो कुरा गर्ने माध्यम प्राय केटीको गफनै हुन्थ्यो । किनकी म माया के हो जान्न चाहन्थे अनि कसरि गरिन्छ सिक्न चाहन्थे । त्यसैले म पनि मन्जु, राजु अनि मदनको कुरा सुनेर मनोरञ्जन गरिराखेको थिएँ । हुन त राजु र मैले धेरै नै कार्य गरेका छौं एक-अर्कालाई साथदिएका छौ । तर पनि राजुको बोलीमा एकरुपता मैले पाईन । आज त्यतिकै र्टाईम पास भनि राखेको हुन्थ्यो भने कहिले होईन यार त्यसले मलाई पर्खि भने म बिहे नै गर्छर्ुुन्थ्यो म अत्तालिन्थ्ये उसलाई अझै बुझने कोसिस गर्थे तर मलाई थाहा छ अझै मैले उसलाई बुझेको छैन् र बुझन पनि सकिन त्यसैले मबाट गल्ति भयो जुन कारणले मसँग बोल्न उ रुचाउँदैन् । हुन त उसले मलाई खोजी गरिरहेको हुन्छ काँहा छ के छ के गर्दे छ जसरी मदनको खोजि गरथ्यो तर देख्दा चाँहि बोल्दैनथ्यो, तर्किन्थ्यो ! उसको भनाई थियो "खोज्दै गईदैन आए भने बोलिन्छ" तर राजुको बिशेषता चाँहि छ कसैलाई अप्ठेरो परोभने सबैभन्दा अगाडि सहयोग गर्ने उ नै तयार हुन्छ । किन मलाई थाहा छैन् यति चाँहि थाहा छ कसैको अगाडि सानो हुने चाहाना उसको हुदैन् । हुन त सबैको नै त्यही हुन्छ तर राजु आफ्नो गल्ति देखाउन नचाहने मान्छे चाँहि हो । म बारक्बार त्यही भनी नै रहन्छु ।
अब मदनको ससुराली तर्फअति नै भए जस्तो लाग्छ अनि मदनलाई निकै नै चेपे जस्तो लाग्छ । राजुलाई मदनले लिएर गएको थियो उसको ससुरालीमा अनि राजुले म हैन तँपाईकी छोरीले चाँही मलाई मन पराउँछे भनेको थियो रे । जसको कारणले मदनकी सासुले राजुलाई केहि नै भन्न सकिन्न् सबैले झुक्नु पर्‍यो । यो त राजुको साँचो भनाई हो किनकी उ त उसको भिनाजुको साथी हो । सुने अनुसार मन्जुले नराम्रेरी कुर्टाई खाई अरे त्यो दिन । एस. एल.सि पास भएको छैन् मन्जु तर यस्तो चलिराखेको थियो । त्यहाँबाट तिनीहरुमा परिवर्तन आएको हुन सक्छ । मन्जुको कलिलो माया न हो काँहा मान्छे चिन्न सक्थि । उ भिनाजु अनि राजुको मोहरा भए जस्तो लाग्छ । मलाई पश्चताप चाँहि मन्जुको भविश्य व्रि्रेकोमा भएको छ । बस कलिलो उमेरमा गरिएको प्रेमले उसलाई अधेरी भविश्य तिर डोरयाएर लग्यो जसमा प्रमुख हात मेरो छ भने गल्ति उसको भिनाजु मदनले गरेको हो । अलि पछाडि म र राजु, राजुको भान्जिको बिहामा शिवगन्ज जानु पर्ने थियो अनि त्यहाँ मदनको आफन्त पनि रैछन् । अनि राजुले सबै खर्च आफै बेहोर्ने शालि लाई पनि ल्या भनि मदन सँग कुरा मिलाएछ । मदनले त्यसै गर्‍यो । हो यहि कारण नै हो मदन मलाई मन पर्देनथ्यो । उसलाई थाहा थियो सबै कुरा तर पनि उ किन गर्थो मलाई थाहा छैन् । मन्जु, आफु अनि आफ्नो बुढी सबैजना जाने योजना मिलायो मदनले अनि हामी गयौं । बिहेमा रमाईलो नै भयो । तर त्यही दिन देखि राजु र मदनमा मंञ्जुको कारणले खट्पट् शुरु भए जस्तो लाग्छ । केमा कुरा मिलेन उनीहरुको हामी र्फकदा राजु र म मात्र थियौं उनिहरु फर्किसकेका थिए । खै के भयो त्यहाँबाट राजु र मदनको मित्रतामा चिसोपना पैदा भएछ । उनीहरु मिलेर वारी-पारीको साधारण काम गर्थे समय कटाउने र पैसा कमाउने राम्रै नै मेलो भएको थियो । तर उनिहरुमा त्यही कारण हो कि अरु खट्पटले हो , राजु र मदन छुटि्य किन हो दर्ुइटैको कुरा मिल्दैन् । बेग्ला बेग्लै हुँदा यति यति भन्छन् अगाडि हुँदा चुपचाप ! त्यो उनिहरु नै जानुन ! सबैले आफनो नै हर्ेर्नुपर्छ मदनले पनि अब चाँहि आफ्नो नै श्रीमति र आफ्नै परिवारको साथ दिए जस्तो छ राजुको विश्वास अब उसलाई लाग्न छोडे जस्तो छ । राजुले मदनलाई के गरो त्यो चाँहि मलाई थाहा हुदैनथ्यो तर मदनले के गरिराखेको छ म नजिकबाट हेरिरहेको हुन्थ्ये किन की मलाई त्यहा अर्के प्रकारको मनोरञ्जन थियो । मलाई आनन्द थियो अनि नँया अनुभव ! म प्रेमको उपासक अर्को अनुभव वटुल्लै थिएँ । वास्तवमा म सोझो मान्छे । मलाई पहिलो चोटि धेरैले ठगे तर दोस्रो चोटि चाँहि नसोचे हुन्थ्यो । त्यसैले होला पहिलो चोटि हुने क्रममा नै म निकै खारिसकेको थिएँ । मलाई यति थाहा थियो जे भएपनि राजुले जे गरेपनि म राजुलाई त्यो मन्जुसँग बिहे गर्ने / हुन दिन्न् । म त्यतिमा नै दृण थिएँ किनकी मैले राजुको ममिको चाहना बुझेको थिएँ जस्तो लाग्थौं । राजुको बानी थियो कि उसले चायो भने जसले पनि भेट्न सक्थ्यौ नभए कसैले पनि सक्तैन्थ्यो । त्यही भएर होला मदन ले उसलाई निकै नै खोजिरहेको थियो । म सँग हेलो हाई मात्र हुन्थ्यो । अरु केहि पनि हुदैनथ्यो । एक दिन सिरियस भएर म सँग समय माग्यो अनि मलाई उसको यथार्थ यसरी बतायो "राजुले के गरको मलाई थाहा छैन्, ससुराली बाट तेरो साथीलाई लिएर आईज भन्छन् । मलाई घर नै जान दिएका छैन् । राजुले मलाई भेटेन अनि म सँग गएन भने ससुरालीबाट अरु मान्छे सहित मन्जुलाई लिएर आएर राजुको घरमा ल्याई जिम्मा लगाईदिन्छन भन्दैछन, भरे अथवा भोलि आउने कुरा छ ! यार जसरी भएपनि राजुलाई मलाई भेट्न भन् भन्यो" म छाँगाबाट खसे, बिचलित भएँ किनकी मैले राजुलाई पहिले नै भनिसकेको थिएँ उ मदन सँग भेटिरहेको थिएन् । अब मलाई राजुको विश्वास लागेन । किनकी उसको भर हुदैनथ्यो हराएपछि ४-५ दिन काँहा जान्थ्यो, जान्थ्यो । तब मैले ठुलो गल्ती गरे जसको पिडा ममा छ । छोरा-छोरा न हो । जे गरेपनि आमा १-२ दिन रिसाएपनि बोलिहाल्नुहुन्थ्यो । म बाठो भएँ । छोरा लाई उसको आमा, भाई अनि दिदिको नजरबाट सधैको लागी गिराएँ उसको राम्रो गर्ने हु भनेर अनायस मै उसको जीन्दगीको गोरेटोलाई काल रात्रीले छोपिदिएँ उसको जीन्दगीमा कहिल्यै नहट्ने काले दाग लगाईदिए । मैले उसको र मेरो मित्रताको सम्बन्घलाई त्यस्तै त्यस्तै अनिश्चतामा धकेलिदिएँ । उसको जीवनको गोरेटोलाई साढे सातको दशाले लत्पताईदिएँ । जहाँ अहिले म त्यसबाट उठेको हर्ेर्ने चाहन्छु । मलाई याद छ त्यो बेलो मेरो नै कारणले राजुको दिदि पनि बिरामी पर्नुभएको । मैले सबै कुरा लगेर राजुको आमा अनि दिदीलाई सुनाईदिएँ । मित्रताको बन्धनलाई धुमल्याईदिएँ । मलाई याद छ । त्यसपछि राजुले के गर्‍यो । त्यो कथा नै टुङ्गयिो तर मन्ञुलाई धेरै नै पिढा भयो उसको जिन्दगी मेरो नजरमा बर्बाद नै भयो । यता राजुको ममि समेत बिरामी हुनुभयो । चारैतिर हल्ला फैलियो । राजु म सँग बोल्न नै छोडेको थियो । तर गल्ती मैले गरेको थिएँ उसको भलाई सोचेर ! म उ नबोले पनि जान्थे जबर-जस्ती उसलाई घचघचाई रहन्थे । मैले उसलाई बाध्य पारे म सँग बोल्नको लागी ! जुन मेरो .................. त्यहाँबाट मैले अनुभव गरे छोरा-छोरा नै हो । अब राजु र मेरो सम्बन्ध कस्तो प्रकारको हो साह्रै नै नजिक भयौं लाग्छ मेरो साँचो थियो भने राजुको देखावटी थियो । प्राय-प्राय उ र म दिन भरि मेरो नै संस्थामा हुन्थ्यौं । राजुले मलाई धेरै ने सहयोग गरेको छ त्यही भएर होला उसको नराम्रो म कहिल्यै देख्न सक्त्तिन । हामीलाई मन्जुको खबर निकै थाहा हुन्थ्यो । मदन र मञ्जुको घरपरिवारले सुटुक्क उसको विवाह एक जड्याहा सँग गरिदिएछन । पछि छुटि्ट्ाएर ल्याएछन् । अहिले मन्जुले आफ्नो माईतलाई नै घर बनाएकी छिन् । म यता आउनु भन्दा एक-दर्ुइ दिन अगि मन्जुलाई भेटेर आएको थिएँ । मलाई उ धेरै राम्री केटि लाग्यो अहिल चाँहि । त्यही भएर नै म पश्चतापको आगोमा जलिनै रहेको छु । मलाई कसैको जिन्दगीमा खेलबाड गर्ने कुनै अधिकार थिएन तर मैले गरे यो ने मेरो भुल भयो । त्यही घटना बाट ममा मायाका सकारात्मक धारण पलाएका थिए । अलि पोजेटिभ भएको थिएँ । तर अब मदन र राजुको त्यती राम्रो सम्बन्ध थिएन त्यति आउजाउ भएन राजुको ममिले मदनलाई तेरो साली भिडाउने भनेर गाली गरे जस्तो लाग्छ । मदन राजुकोमा जान नै छोडेको थियो डराएर हो कि किन मलाई थाहा छैन राजु पनि जाँदेनथ्यो तर मदनको हरेक कुरा राजुलाई थाहा हुन्थ्यो अनि राजुको पनि हरेका कुरा मदनलाई । म भन्न सक्छु । राजुले मञ्जुलाई मन चाँहि पराएको थिएँन । अनायस मै भएको भुल थियो त्यो अनि ...............................................
उ जतिखेर पनि मुना मात्र भनिरहन्थ्यो । मुनाले ओके भन्ने बित्तिक्कै यसो गर्छर्ुुसो गर्छर्ुुन्थ्यो । राजु मलाई केटीहरु केहि हैन भनी प्रमाणीत गर्न चाहन्थ्यो । र उसले गरेको पनि थियो । म पनि वास्तवमा लेडिजहरु ...................... भन्ने मान्छे । किन की मैले प्रेम कसै सँग पनि गरेको थिईन अनि प्रेम गर्न भन्दै त्यसको फाईदा पनि लुटेका थिएन । जस्तो अहिलेका शिक्षित युवा-युवतीले गर्ने गर्छन् । वास्तवमा यो ........ केही पनि होईन त्यो त धर्म संस्कार सँग भर पर्ने कुरा हो । हाम्रो ठाउँमा अलि पश्चतैन तर युरोप तिर त्यो त आवश्यकता हो नभइ पाखे हर्ुइछ । पक्कै केहि चाँहि हर्ुइन्छ । ठिक्क उल्टो हर्ुइछ विश्वास लाग्दैन भने याहु म्यासेन्जरमा भएको चाट रुमको रिजिनलको नेपाललाई छानेर त्यहाँ नेपालीमा शिक्षित युवा-युवतीले गरेको गफ सुन्न सकिन्छ अनि चाँहि विश्वास लाग्छ है । वास्तवमा प्रेम मनोरञ्जन हो समय काट्ने राम्रो उपाया अनि मनोरञ्जन गर्नेलाई नै प्रेम गरिन्छ होईन भने !!! भने भो नि आफुले के का लागी प्रेम गरिएको थियो । तर म चाँहि त्यसरी गर्देनथ्ये जसरी अरुले गर्ने गर्छन बस म त खुला रुपले बोल्थे मात्र मेरो त आँखाको प्रेम हुन्थ्यो त्यो पनि एक्लैले हर्ेदा मात्र ! आँखामा आँखा जुदाएर पनि होईन । मलाई त एकतफिर् प्रेम नै राम्रो लाग्छ जसमा कुने बन्धन हुदैन् । म मुना सँग बोल्थे । उसको घर गएको थिएँ तर त्यती परिचित भएको थिएन् । अब मैले उ सँग मित्रता बढाउनु पर्ने थियो । उसलाई केही भन्नु थियो । राजुको लागी केही गर्नु थियो । एंंवम क्रममा कमला ढुङ्गाना -पुड्की) जो सानै देखि हामी सँगै पढेका थियौं मेरो संस्थामा आवद्ध भएको थिई । कमला र मुना बीच राम्रो सम्बन्ध थियो मित्रताको ! मैले कमलालाई सबै भने अनि राजुले पनि केहि भन्यो । कमला र मैले कि वार कि पार गर्ने चाह्यौं । राजुको मुना प्रतिको मायाको लेखाजोखा गर्न चाह्यौं । वास्तवमा म राजुको मुना प्रतिको माया कस्तो हो म वर्ण्र्ाागर्ने त सक्त्तै सक्त्तिन तर त्यही उसैको प्रवाह हो म मा ! म माया कस्तो हो जान्न चाहन्थे / अनुभव गर्ने चाहन्थे । त्यसै त्यसै कसैको मायामा डुबेर हराउन चाहन्थे । म अचम्ममा नै पर्थे । मेरो भाईलाई एक-दर्ुइ जना केटिले गरेको माया देखेर । म उसको दाई भनेर म बाट उनिहरु भाग्थे । म त्यसै लजाँउथे उनिहरु तर्किन्थे । म सोचमग्न हुन्थ्ो । अनि मलाई पनि यो माया के हो जान्न मन लाग्थौ । त्यसै त्यसै एकान्तमा कसैलाई मन पराउन मन लाग्थौं तर .......................................
म त्यो दिन कहिले भुल्न सक्त्तिन जुन दिन पहिलो चोटि मुना, म, कमला अनि राजु मःम खान गएको थियौं । राजु यति खुशि थियो कि म वर्ण्र्ाागर्न नै सक्त्तिन् । लाग्छ पहिलो चोटि मुना लाई यति नजिकबाट उसले हेरेको थियो अनि आँखामा-आखाँमा जुदाएर बोलेको थियो । उसको मनमा अनैकौ तानावाना हरु बुनिएका थिएँ, लाग्छ । मनको सगरमाथालाई अनेकौ फूलका गुच्छाहरुले सजाईरहेको थियो । उसमा आज अर्के प्रकारको चमक थियो निकै भन्दा निकै नै उ खुशि थियो पहिलो चोटि उसमा मैले यस्तो प्रकारको खुशि देखेको थिएँ । म खुशि थिएँ किनकी उ खुशि थियो । कमला र म मात्र राजुलाई हेरेर हाँसिरहेका थियौं । मुना अनभिज्ञ ! अब कमलाले र मैले मुनालाई सबै यथार्त बतायौं । कमला बाहिर गएपछि मैले मुनालाई क देहि ज्ञ सम्म भने राजुको बारेमा सबै यथार्थ बताएँ । यति र्टचर दिएँ मैले मुनाले ! जस्तो कि आज सम्म मैले कसैलाई दिएको नै छैन् । बस मुना सुनि नै रहेकि थिई अनि मात्र भन्दैथिई "हुनै सक्त्तैन्, म गर्न नै सक्त्तिन, म मेरो परिवारलाई फेरी धोका दिनै सक्त्तिन् , बरु म ....................."। म लाचार भए उसलाई पढ्ाउँदा-पढ्ाउँदा ! मेरो केहि नै चलेन । बस. म चुप लागे अनि राजुको वास्तवीक प्रेम उसलाई अवगत गर्राई नै रहे । उ भन्दै थिई म साथि बन्न चाहन्छु प्रेमिका होईन् , होईन, होईन । मैले केहि गर्न नसक्ने मैले थाहा पाएँ , मेरो केहि जोर चलेन । म राजुको अगाडी मुख देखाउन नसक्ने नै भएँ । सिर्फराजुको लागी केही गर्ने खोजेको थिएँ तर केहि गर्ने चै केही पनि सकिन । तर मैले वास्तवमा मुनालाई राम्रो मित्रका रुपमा पाएँ । अनि म त्यसै कमला अनि मुना सँग नजिकिए साच्चै कन्चन मित्रताको गाठो बस्यो मेरो कमला र मुना प्रति त्यहाँबाट चाँहि ! म उनिहरुको पनि भविश्य राम्रो भएको हर्ेर्ने चाहन्थे । म पनि अब उनिहरुको खुशिमा खुशि हुन अनि दुखमा सामेल हुन चाहने भएँ । त्यो भन्दा अगाडि म राजुको लागी मात्र नजिकिन चाहेको थिएँ, नजिकिएको थिएँ । अब म अप्रत्यासित रुपमा उनिहरुको राम्रो भएको खुशि भएको हर्ेन चाहने भएको थिएँ ।उनीहरु सँग नजिकिएको थिएँ । उनिहरुको विरुद्धमा कसैले कुरा गर्दा मलाई रिस उठ्न थाल्ने भएको थियो वास्तवमा म मुना र राजुप्रति चिन्तित थिएँ, छु अनि जीवनभर रहि नै रहनेछु । साच्चै लेडिजहरु पनि प|mेन्क हुँदोरहेछ भन्ने मैले मुना र कमलाबाट बाट थाहा पाएँ । म अब मुना र राजु दुवैको भविश्य राम्रो भएको हर्ेन चाहने भएको थिएँ । तर मैले राजुलाई वास्तवीकता वताउनु थियो । मैले धेरै सोचे अनि सेलरोटी घुमाएजस्तै गरि घुमाएर बेलिबिस्तार लगाएँ । उ मात्र किन हुदैन् किन हुदैन् मात्र भन्थ्यो । राजुले पनि आफ्नो इतिहास देखि सक्झेर ल्यायो उ त्यसै त्यसै ब्याकुल भयो । उसका सपनाहरु छ्ताछुल्ल भएर पोखिए । उ साँच्चै नै .....................मुना र उसको फोनमा गफ पनि भयो ।मुनाले सबै थोक नै भने जस्तो लाग्छ कि उसले उसलाई अपनाउन किन सक्त्तिन भनेर ! तर उ एकोहोरो भेडोजस्तो मलाई माया गर्र्छौ भने बोले नभए बोल्न छोडोदेउ भन्थ्यो । मुनाले सम्झाउन खोज्थी राजु त्यसै त्यसै मोडिन्थ्यो । यसरी दिन बिते । राजुले केहि गर्छ कि भनेर हामी तिनै जनालाई राजुको पिर थियो बढि चाँहि मुना अनि मलाई ! मलाई उसले सोधिरहेकि हुँन्थी राजु खोई के गर्दे छ भनेर । उसको र मेरो बोल्ने माध्यम नै राजु थियो, बस् त्यो भन्दा अरु केहि नै थिएन् । राजुलाई असहाय भयो उ छट्पटाइरहेको थियो । आपुूले आफूलाई के सोचेको थियो मैले त्यो चाँहि जान्न सकिन तर । त्यहाँबाट मसँग उसले बोलचाल कम गर्ने थालेको थियो । मलाई पनि पश्चताप चाँहि अझै छ मैले मुनालाई उस प्रति आकर्पित गर्ने सकिन् । म यो पिढा कहिले पनि भुल्न सत्तिन् । तर मैले सकिन् किनकी पिढा दुवैतिर उस्तै छ । अब मेरो चाहना बस् उनिहरुको राम्रो नै होस् भन्ने थियो । उ मसँग बोल्न कम गर्ने चाहन्थ्यो म झन उ सँग नजिकिन्थे । उ मैले बोलाउँदा मात्र बोल्थ्यो नभए नदेखे जस्तै गरेर हिन्थ्यो । म गईरहन्थे, बोलिरहन्थे ।
म राजुलाई यति मात्र सोध्न चाहन्छु कि के मित्रता आप\_mनो स्वार्थका लागी / आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने मात्र गरिन्छ नभए मित्रताको कुनै मुल्य छैन् --
वास्तवमा !! म स्वार्थी देखिए होला तर । तर मैले त्यस्तो सोचेको र्छर्ुइन् हुन त उसको लागी म जस्तो धेरै नै साथि छन् तर मेरो त उ मात्र हो । हो म बाट गल्ति भयो म स्विकारछु । तर .........एउटा गल्ती ............ !!! त्यो घटना पनि मेरो जीन्दगीको एक अंश भएको छ अनि मलाई प्रोत्साहित गरेको छ जसले मैले नेपाल छोडे ! भगवान ले साथ दिए फेरी फर्केर गई नेपालमा बस्न चाहन्न । हो ! म स्वार्थी थिएँ, मेरो त्यो परिस्थिती अनि ब्यस्तता थियो । आखिर मलाई चाँहि कसले बुझो । सबै साथीले आफ्नो मात्र हेरे । कसैले मेरो बारेमा सोचेन । राम्रो मान्छेलाई पनि तँ पागल होस् भनेर भनि रह्यो भने सोच्न बाध्उ हुन्छ कतै म पनि पागल नै त होईन भनेर ! ममा पनि त्यस्तै भयो । म पनि कोही सँग बोल्न चाहन्थे । नजिकिन चाहन्थे तर मैले भन्न सकिन, उ बोल्दा पनि म चुप लाग्नु पर्यो । मैले खुला आँखाले हेरिन मेरो लागी पनि त पातको पतिङ्गर बनाईयो । मैले नगरेको कामलाई म सँग जोडियो अनि आरोप लगाईयो । भनि देको भए हुन्थ्यो नि तँ नआइज भनेर । तर ............. मलाई केहि छैन् म त सानै देखि यस्तैमा बानी परेको मान्छे ।मलाई कसैले साथ नदिएपनि हुन्छ । म यस्तैमा नै रमाउन चाहन्छु बस मलाई सुन्य अधेरी रात अनि स्पिकरबाट निस्किएको क्यासिकल गित भए पुग्छ । त्यति भए मेरो हरेका क्रियाकलापलाई कालो रातमा रिवाइन्ड गर्ने सक्छु । मेरो लागी कसैले गरेन भनेर पनि मलाई गुनासो छैन् मैले नै गरे मेरो लागी । चाहे जे होस् बस आशाको लहरो सुन्यतामा पिङ खेलिरहेको छ । मच्चिदा-मच्चिदै कहिले चुटिने हो म पनि प्रंतिक्षारत छु हर्ेनलाई ! अरुले भन्दा मैले भनेको मात्र हो, मेरो पनि कन्धन निस्केको हो । मलाई फेरी पनि मेरो केही गुनासो छैन् उनी नभए................पनि..........मेरो केहि गुनासो छैन् । वास्तवमा मलाई सबैले धेरै गरेको छ जसले गर्दा म आज यसरी बाँचेको छु नभए म ..................................................मलाई पनि थाहा छैन् ।
मलाई जीवनमा गुनासो यति छ कि उसलाई थाहा भई भई मलाई आरोप लगायो । उसलाई थाहा थियो सबै कुरा उसको भान्जिले भनेको भनेर तर अर्कातिर थोपोरो किन हो मलाई थाहा छैन् । म उनको नराम्रो देख्न सक्त्तित थिएँ । नराम्रो सुन्न सक्तिनथे जसरी उसको !!! तर किन --- मलाई डर अनि त्रास देखाईयो मलाई थाहा छैन् । त्यही भएर नै हो फोनबाट नै हामी आज देखि नबोलौ भनेर मैले प्रस्ताव राखेको र उसलाई ढुङ्गा खोज्दा देवता मिले जस्तो भएछ त्यस्तै भयो अन्त्यमा हामी बोल्न झाड्यो केही कारण छैन बस् छाड्यौ बोल्नलाई । पछाडि मलाई उसकै भान्जिले भन्दा थाहा भयो । उसलाई थाहा भईर्-भई मलाई आरोप लगाएको रहिछ । हो त्यही कारण नै हो म यता आउने बेलामा उसलाई भन्न गईन, उसको घरमा गईन किनकी उसलाई थाहा छ म उसको घरमा गएको उसलाई मन पर्देन भनेर । तर मैले डेको गाडी चढ्नु भन्दा अघिल्लो दिन पनि उसलाई हेरेको थिएँ उसको घर अगाडि बाट गएको थिएँ । हुन त मैले कतारबाट फेान गरेर माफि मागे तर मैले नी फोन गरे । उसमा के छ मलाई थाहा छैन् । बस् मैले मेरो कर्तब्य निभाएको छ ु जस्तो लाग्छ, मैले उसलाई असल मित्र ठानेको छु । अनि यति भन्न चाहन्छु "सोचे जस्तो हुन्न जीवन................सोचे जस्तो हुन्न रैछ जीवन ..................."।
अनि म अझै पनि उस्तै छु जस्तो पहिली थिएँ । अली बुढो भएँ । अलि कुप्रो भए होला ऐना त हेरेको र्छर्ूइन तर साथीहरु कपाल फुलेछ भन्दै थे । तर मेरो नाम कपिल नै हो अनि थर आचार्य । मेरो घर त्यही छ जहाँ थियो । म त्यहीखेर कै साथी हु जतिखेर उसलाई म प्रिय लाग्थे होला । म मा अझै कुनै परिवर्तन छैन । मैले भनेको कुरा म पुरा गर्ने कोशिस गर्ने नै छु तर कति मैले उसलाई खुशि बनाउन पनि भनेको थिएँ । तिमी मलाई जे सक्झन्छौ सक्झ तर म त्यही कपील हुँ , थिएँ अनि रहनेछु । त्रि्रो मेरो सक्बन्धको बीचमा जे आएपनि हाम्रो मित्रता मित्रता नै रहनेछ चाँहे तिमी मलाई पर्राई नै सम्झ तर यो चाँही साँचो हो मैले तिमीलाई बिर्सिएको कुनै दिन छैन । हरेक पल, तिमी यादमा छौ । मैले त्रि्रो लागी गल्ती गरे तर होस भनेर होइन् अनायस मै भएको मेरो कमजोर मुल्याङकन रहेछ । म स्विकार छु मेले गल्ति गरे तर म सँग बोले त भो नि ! किन मलाई त्यतीकै आरोपित पार्र्छौ । म त्यो च्याप्टर बाहेक अरुमा घन्टौ सम्म बाोल्न सक्छु । त्यसैमा पनि भन्न सक्छु तिमी मुना भएर सोचेर हेर त तिमी के गरथेउ नभए कमलालाई सोध ...................... --------
म त्रि्रो प्रत्येक कविता पढ्ने छु अनि तिमीलाई बुझने कोशिस गर्नेछु । पहिले जस्तै हिन्न त नपाइएला । तर मेरो यहि सोचाईले..गल्ति....भएको हो ! बुझ है !
शुभकामना !! धेरै !!!!!!!!!!
हरेक पलमा,,, त्रि्रो दिर्घर्ााको !!!!!!
कामना गर्न सकुँ म !!!!!!!!!!
आजको मिति २०६५ मार्ग २३ हो तर्सथ ०८ डिसेम्बर २००८, अपडेट गर्न मन लाग्यो अहिलेको परिस्थितिलाई ।
मैले यी माथिका सबै बुँदाहरु कतारको मेरो प्रवेशसँगै लेखेका कुराहरु हुन् । कतार २ बर्षो बसेर म घर पनि फर्के । मैले पुरानो मित्रलाई भेट्न चाँहेको थिइन् भेट भयो जम्काभेट । म राजुको घर पनि गइन् । तर उसको भाइ, दिदी र ममीलाई देख्ने मौका पाए । मुनासँग भेट भयो दँशैको बेलामा उसको घरमा । त्यति मात्र हो । पछि भेटि्न चाहिन् भेटि्न पनि । म घर त्यहि दँशै र तिहार भरि बसे । मेरो प्लान बेङलोर बसेर पढ्ने थियो । तर विविध कारणले भएन । दिल्ली र बेङलोरको एक चक्कर लगाएर म घर फर्के अनि काठमांडौ । कतारबाट फर्केपछि जम्मा लगभग ४ महिना म नेपाल बसे । त्यसमा २ महिना काठमांडौ १ महिना घर र १ महिना भारतमा बित्यो ।
राजुलाई नेपालमा नै बसेको पाए । साइबर चलाएर बसेको रहेछ जे होस टाढैबाट ब्यस्त भएको देखे तर म बोलिन । म बोल्न चाहिन् । त्यसपश्चात पढ्न भनेर म मलेसिया छिरे । मलेसिया आएको केही समय पछि मुनाको त्यहि पहिलाको नै केटासँग विहा भएको खबर पाए । राजुको मलाई थाहा भएन् । मदन प्रसाइ र उसकी बुढी मलेसियामा नै छन् । सँगै बस्छन् कमाउँछन् । म पनि गएर भेटे लगभग ३ दिन मदनहरु सँग बसे । समुन्द्रि खाना खुब खाइयो । मदनको बोलचाल रहेनछ राजुसँग । मदनको सालीको फेरी अर्को केटासँग बिहे गरिदिएछन् । अहिले राम्रो रहेछ । खुशी लाग्यो सुनेर । सबैको दिनचर्या राम्रो नै पाए । म मात्र म हल्लिरहेछु ।